कप्तान विराट कोहली आउट नै नभई एकाएक किन फर्किए पेभेलियन ? यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
कप्तान विराट कोहली आउट नै नभई एकाएक किन फर्किए पेभेलियन ? यस्तो छ कारण
नयाँदिल्ली । क्रिकेटमा जबदेखि डिएसआर लागु भएको छ तब कयौं अवसरमा खेलाडी आउट भएपनि उनीहरूले अम्पायरको निर्णयलाई चुनौती दिने गरेका छन्।
यस्तो बेलामा निक्कै कम अवसरमा मात्र खेलाडी आउट नभएको देखिदैं आइएको छ। त्यस्तै आउट नभएपनि खेलाडीले आफूलाई आउट मान्दै पेभेलियन फर्किने पनि गरेका छन्। हिजो पाकिस्तान विरूद्धको खेलमा भारतीय कप्तान विराट कोहली ४८ औं ओभरमा एक अपिल हुँदैमा पेभेलियन फर्किए।
पाकिस्तान विरूद्धको खेलमा ४७ ओभरमा भारतले ३११ रन बनाएको थियो। ४८ औं ओभरमा मोहम्मद रियाज बलिङ गर्न आए उनले सो ओभरको चौथो ओभरमा बाउन्स बल हाने। त्यो बल विराटको टाउकोमाथिबाट जाँदै थियो। यस बललाई विराटले हुक गर्ने कोशिस गरे तर बललाई ब्याटले छोएन। मोहम्मदले आउटको अपिल गरे। यो सट खेल्ने क्रममा विराट घुमे। त्यसपछि उनले अम्पायरलाई हेरे। अम्पायरले आउटको अपिललाई स्वीकार गरेको देखेपछि कोहली पेभेलियन फर्किए।
उनी पेभेलियन फर्किए पनि रिप्लेले उनी आउट नभएको स्पष्ट देखायो। अल्ट्राएजमा पनि बलले उनको ब्याट छोएको देखिएन। सायद यसको महसुस विराटलाई भएन र उनी आफूलाई आउट मान्दै पेभेलियनतीर लागे। पेभेलियन पुगेर उनले आफू आउट नभएको थाहा पाएपछि उनको अनुहारमा चिन्ताको भाव देखियो।
हुन पनि कतिपय अवस्थामा ब्याट हावामा तीब्र गतिमा लहराउँदा त्यसबाट केहि आवाज आउँछ। विराट कोहलीले पनि त्यसैलाई महसुस गरेको हुनुपर्छ। त्यही भएर पेभेलियन पुगेपछि उनलाई ब्याट घुमाइघुमाइ हल्लाएर केहि बुझ्ने प्रयास गरेको देखिएको थियो। तर जे भएपनि हिजोको खेलमा विराट आउट नभइ नै पेभेलियन फर्किए।
भारतले आइतबार चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई डिएल मेथडमा ८९ रनले पराजित गर्यो। वर्षाले प्रभावित सो खेलमा भारतका अलराउन्डर विजय शंकरले नयाँ रेकर्ड बनाएका छन्। विश्वकपको डेब्यू खेलमा पाकिस्तानका इमाम उल हकलाई आउट गरेपछि रेकर्ड बनेको हो।
उनले विश्वकपमा बलिङ गरेको पहिलो बलमै विकेट लिएर रेकर्ड बनाएका हुन्। यसअघि भारतका लागि विश्वकपको डेब्यू खेलको पहिलो बलमा कुनै पनि खेलाडीले विकेट लिएका छैनन्। भारतले दिएको ३३७ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानविरुद्ध पाँचौ ओभरमा कप्तान विराट कोहलीले भुवनेश्वर कुमारको हातमा बल थमाएका थिए।
भुवनेश्वरले पहिलो तीन बलमा कुनै रन दिएनन्। चौथो बलमा भुनवेश्वर घाइते हुन पुगे। बलिङका लागि दौडने क्रममा खुट्टा फर्किएपछि भुवनेश्वर मैदान छाड्न बाध्य भएका थिए। त्यसपछि सो ओभरको बाँकी २ बल पूरा गर्न विजय शंकर आएका थिए। विजयले पाँचौ बलमा इमामलाई एलबिडब्लूको धरापमा पारेर भारतलाई पहिलो सफलाता दिलाएका थिए।
यसैबीच जारी विश्वकपमा उत्कृष्ट खेल देखाउन नसकेको पाकिस्तान हिजोको खेलमा भारतसँग पराजित भएसँगै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। जितसँगै सेमिफाइनल खेल्ने भारतको समिकरण बलियो भए पनि पाकिस्तानको सेमिफाइनल यात्रा भने कठिन अवस्थामा पुगेको छ।
पाँच खेलमा पाकिस्तानले आइतबारको खेलमा तेश्रो हार बेहोर्यो। वर्षाका कारण खेल रद्ध भएपछि एक खेलमा अंक बाँडेको पाकिस्तान इंल्याण्डविरूद्धको खेलमा मात्र विजयी भएको छ। यसरी ३ हार, एक बराबरी र १ जितसहित वर्तमान अंकतालिकामा ४ अंकसहित पाकिस्तान ९ औं स्थानमा रहेको छ।
पाकिस्तानको यस अवस्थाले उसको सेमिफाइनल यात्रा कठिन बनाएको हो। अंक तालिकाको शीर्ष ४ मा रहने टोलीले सेमिफाइनल खेल्नेछन्। यसका लागि कम्तीमा पनि ११ भन्दा बढि अंक हुनु जरूरी छ। यसका साथै रनरेटले पनि सेमिफाइनल समिकरणलाई प्रभावित तुल्याउने सम्भावना उत्तिकै छ।
त्यसैले अब पाकिस्तानले बाँकी चार खेलमा हरेकमा अनिवार्य जित हासिल गरेको अवस्थामा मात्र सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावनालाई जिवित राख्नेछ। यी सबै खेल जित्दा उसले अधिक्तम ११ अंक जोड्नेछ। यसको मतलब उसका लागि हरेक म्याच ‘गर या मर’ को अवस्था हो।
कएममात्र खेल हारेमा वा रद्ध भएमा पाकिस्तानको सेमिफाइनल पुग्ने आशामा तुषरापात हुने निश्चित जस्तै छ। त्यस्तै चारै खेल जिते पनि रनरेटले उसलाई समस्या पार्ने सम्भावना उत्तिकै प्रवल छ। अब पाकिस्तानले २३ जूनमा दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्नेछ भने २६ जूनमा न्यूजिल्याण्डको सामना गर्नेछ।
यी दुई टोलीसँगको खेल पाकिस्तानका लागि सहज हुनेछैन। यी दुबै टोलीलाई पराजित गर्ने कडा चुनौती उसलाई छ। यस्तै प्रतियोगितामा कमजोर मानिएका बंगलादेश र अफगानिस्तानसँग पनि उसले खेल्न बाँकी छ। यी दुबै टोली पाकिस्तानका लागि केहि सहज भएपनि नतिजा उल्टाउन माहिर यी टोलीसँग ऊ सर्तक हुनैपर्छ।
यसका अलावा पाकिस्तान सन् १९९२ को अवस्था पुनरावृत्तिमा भए सेमिफाइनल पुग्न सक्नेछ। बस यसका लागि वर्षाले अन्य टोलीको म्याच रद्ध भएर उनीहरूलाई पाकिस्तान मुताबिकको घाटा हुनुपर्‍यो। सेतोपाटीबाट
प्रिमियर लिगमा न्युकासल युनाइटेड विजयी
दक्षिण अफ्रिकाविरूद्धको टी-ट्वान्टी सिरिजमा इंग्ल्याण्डलाई अग्रता
क्रिकेट खेलाडीको पीसीआर परीक्षण गर्न स्वाब संकलन गरियो
नेसन्स लिगः बेल्जियम र इटाली फाइनलमा प्रवेश
विश्वकप छनोटमा अर्जेन्टिनाको तेस्रो जित
नेपाल र बंगलादेशबीच दोस्रो खेल आज, शुक्रबार पराजित नेपालले आज के गर्ला ?
फिपा विश्वकप छनोटमा चिलीको पहिलो जित